TACSI : – Allaah ha u naxariistee Halgamaa/Abwaan Xaliimo Soofe Faarax oo maanta ku geeriyootay magaalada Garoowe ee Puntland | puntlandi.com
TACSI : – Allaah ha u naxariistee Halgamaa/Abwaan Xaliimo Soofe Faarax oo maanta ku geeriyootay magaalada Garoowe ee Puntland
INAA LILAAH WA INAA ILEEYHI RAAJUCUUN
” GEERIYEY XISHOODLAAY XALIIMANA MA DISHAY ” .
Allaah ha u naxariistee waxaa maanta 30.04.2018 ku geeriyootay magaalada Garoowe ee Caasimada Dawlada Puntland Halgamaa/ Abwaan Xaliimo Soofe Faarax.
Allaah ha u naxariistee halgamaa / Abwaan Xaliimo Soofe Faarax ayaa magac iyo Taariikh dahabi ah ku laheyd guud ahaan Ummada Somaaliyeed dhexdeeda iyo halgankii loo soo galay Xornimada, dhismaha iyo horumarinta Dawladnimadii Somaaliyeed.
Halgamaa Marxuumaf Xaliimo Soofe Faarax ayaa lagu xusuusan doonaa doorkii shariifka ahaa ee ay ku laheyd halgankii iyo xoogagii xornimodoonka Somaaliyeed ee SYL, oo Allaaha u naxariiste Maamo Xaalimo Soofe ay ka mid aheyd gabdhihii fara ku tiriska ahaa ee ka mid noqday Horseedkii Leegada, Xabsigana u galay, waxyeeladuna ka soo gaartay gumeystihii Talyaaniga.
Sidoo kale Halgamaa/ Maamo Xaliimo Soofe Faarax oo hodan ku aheyd, ilaaheyna hibo u siiyey halabuurka iyo curinta sugaanta Somaaliyeed,ayaa Taariikhdu werin doontaa maansooyinkii iyo Buraaburadii wadaniga ahaa ee ay kula dirirtay gumeystihii Talyaaniga iyo Ingiriiska ahaa ee xoogga ku haystay Cariga ay degto Ummada Somaaliyeed.
Marxuum Xaliimo Soofe Faarax ayaa mudadii burburka ku nooleyd, kana mid ahayd Hooyooyinka iyo waxgaradka Jaaliyada Somaaliyeed ee Danmark.
Anaggoo ka tiiraaneysan geeridaa naxdinta leh ee ku timid Marxuumda waxaanu Allaah uga baryeyna naxariis iyo dembi dhaaf, Jannadii fardawsana Ilaah ka waraabiyo, isla markaana Kitaabkiisa gacanta midig ka siiyo.
Sidoo kale waxaanu tacsi u direynaa Qoyskii,Ehelkii iyo Asxaabtii iyo dhamaan shacbiga Somaaliyeed ee marxuumdu ka baxay in Allaah Samir iyo iimaan ka siiyo.
Maamulka iyo Hawlwadeenada Shabakada Puntlandi waxay tacsi tiiraanyo xambaarsan u dirayaan dhamaan Awladii iyo dhamaan Qoyska reer Soofe Faarax, Ehelkii iyo Asxaabtii marxuumadu ka baxay inuu Eebbe samir iyo iimaan ka siiyo. Marxuumdana waxaanu Allaah uga baryeynaa naxariis iyo dembi dhaaf